330ml 750ml vakadzi vanogadzira bhodhoro regirazi
Fekitari yedu iri muShandong, China. Inobata nzvimbo yakakura, saka tine vashandi vanopfuura mazana mashanu. Kambani yedu ine michina yemhando yepamusoro, tinogona kuvimbisa mhando yeakagadziridzwa doro bhodhoro.
Iyo yakasarudzika bhodhoro redoro ndeimwe yemapurojekiti emhando yepamusoro mukambani yedu. Zvigadzirwa zvedu zvikuru mabhodhoro egirazi egiredhi epamusoro senge mabhodhoro evodka, mabhodhoro ebrandy, mabhodhoro ewhiskey, mabhodhoro edoro, jamu bhodhoro zvichingodaro. Isu tinogona zvakare kupa amber girazi mabhodhoro, mabhodhoro egirinhi, uye mabhodhoro emvura. Kambani yedu inogara ichisimbirira pamhando yekutanga, uye isu tinonyatso kutevedzera mitemo mukuita kwe750ml square mabhodhoro edoro rekutengesa. Tinogona kuvimbisa kuti tinokwanisa kugadzira iyo yakakwana yewaini girazi bhodhoro. Bhodhoro redu redoro rakagadzirirwa rinotengeswa zvakanaka kumba nekune dzimwe nyika. Tinotarisira nemoyo wose kushanda newe. Uye zvakare, isu tine yekutanga-kirasi mushure mekutengesa-sevhisi, isu tichagadzirisa dambudziko rako rekutakura.
Kukanganisa pamuromo wegirazi mabhodhoro uye zvikonzero zvavo uye mhinduro
1.Muromo unotsemuka (kuputika muromo, muromo unoputika). Longitudinal tsanga inodonha kubva mumuromo webhodhoro ichidzika yakaderera tembiricha. Kuveura kusina kunaka. Nyaya yacho yakanyanyisa mumusoro. Kubata negirazi kwakanyanyisa kutonhora, kwakasviba. Yakawandisa pakadzika, kwete kudonha kwakakodzera. Nguva yekufema yakarebesa. Positive blowing head is too shallow, center is not straight, blowing pressure is too big or compressed air with water.Kushandisa zvisina kunaka kwemhepo inotonhorera inovhuvhuta kumuromo webhodhoro padivi rekuumbwa.
2.Muromo unotsemuka (fried screw). Shallow crack in bottle thread. Girazi rinonyanya kutonhora uye musoro wezvinhu wakapinza.Kuveura kusina kunaka (chigero kudhinda kana kucheka zvinhu neburr). Iyo yekutanga mold uye muromo mold inopindirana zvisina kunaka, muromo mold haina kugadzikana, kuvhura kwekutanga mold kunotyaira muromo mold.Maoko emapikisi haana kuenzana. Musoro wemhepo unodonha zvakanyanya, mhepo yemhepo yakanyanya kana nguva yemhepo yakarebesa. Kupera kweiyo tipping mechanism haina kubhurwa nemazvo. Core sleeve ipfupi kana kuderera zvakanyanya.
3.Muromo webhodhoro hauna kukwana. Girasi isina kukwana pabhodhoro seal kana thread. Tembiricha yekudonhedza yakanyanya kana kuderera, musoro wedonhwe wakapinza kana kukora, uye pakati hauna kutwasuka. Kusakwana kwemhepo yekumanikidza uye nguva, mhepo musoro wakavharika maziso kana kubuda kwemhepo. Kusakwana mafuta jekiseni mukutanga mold. Mafuta kana mvura mune yekutanga mold inogona kudzivirira girazi zvinhu kubva mumuromo mold. Iyo mold ne core zvanyanya kusvibiswa. Kufa kwekutanga uye kufa kwemuromo hazvikwane. Iyo backblow yakavhurwa nekukurumidza.
Zvakapfuura: Yakasarudzika RUM Bhodhoro 500ML700ML750ML Mutengo
Zvinotevera: 700ml 1000ml Girazi Doro Bottle Suppliers
100ml 500ml 750ml Super Flint Cork Pamusoro neFla...
Tsika 750ml700ml375ml Frosted Girazi Bhodhoro Ndiani...
Fancy Vodka Bottle Wholesale Mutengo